Mooshin ka dhan ah Xukuumada Soomaaliya oo si xowli uga socda magaalada Muqdisho (Warbixin) – idalenews.com
Mooshin ka dhan ah Xukuumada Soomaaliya oo si xowli uga socda magaalada Muqdisho (Warbixin)
Mooshin ka dhan ah Xukuumada Soomaaliya ayaa ka socda magaalada Muqdisho, iyadoo shirar gaar gaar ah iyo xod xodasho badan ay ka dhex socoto Baarlamaanka gudihiisa, kaasoo lagu xoojinayo Mooshinka.
Sida ay sheegayaan wararka mooshinkan ayaa waxaa ilaa iyo hada saxiixay in ka badan 80-mudane, kuwaasoo awood u siineysa inay Gudoonka baarlamaanka horgeeyaan mooshin miisaankiisa culus yahay.
Mid ka mid ah Xildhibaanada baarlamaanka oo la hadlay idalenews.com ayaa sheegay in habeen iyo maalin hotelada ay ka socdaan shirar ku saabsan arrintan, isla markaana ay bar bar socoto balan qaadyo Xildhibaanada loo sameynayo, laguna soo jiidanayo.
Mooshinkan la wado ee qorshihiisa yahay in lagu rido Xukuumada uu hogaamiyo Ra’iisul Wasaaraha ayaa ku soo beegmeysa, iyadoo maalmihii u dambeeyay ay socdeen qorshayaal la doonay in isku shaandheyn loogu sameeyo Golaha Wasiirada, isla markaana la kordhiyo tirada Wasiirada.
Dood cilmiyeedka looga hadlayay sida dhalinyarada uga qeyb qaadan karaan ammaanka oo Muqdisho ka dhacay
Maamul KMG oo ku saleysan Nidaamka Awood qeybsiga 4.5 oo Dowladdu ku howlan tahay inay u magacowdo Gobalka Jubbada Hoose.